गायिका अञ्जु पन्तको विवाह, छोरी भन्दा आमा तरुनी – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारगायिका अञ्जु पन्तको विवाह, छोरी भन्दा आमा तरुनी
गायिका अञ्जु पन्तको विवाह, छोरी भन्दा आमा तरुनी
काठमान्डौ :गायिका अञ्जु पन्तले दोस्रो विवाह गर्ने भएकी छिन् । गायक तथा संगीतकार मनोजराजसँगको सम्बन्ध टु’टेपछी एक्लो जीवन बिताउँदै आएकी अञ्जुले पत्रकार थीर कोइरालासँग विवाह गर्न लागेकी हुन् । थीरको प्रेममा डुब्दै आएकी अन्जुले पत्रकार सामु आफू विवाह गर्न लागेको बताएकी हुन् । उनले विवाह कहिले हुन्छ भनेर खुलाउन भने चाहिनन् ।अहिले दुई परिवार बिच विवाहको बारेमा छलफल भईरहेको उनले बताएकी छिन् ।छोरी परितोशिकाका कारण अन्जुले विवाह गर्न लागेको बुझिएको छ ।
आफूले विवाह गरेर गएपछि आमा एक्लै हुने पीरले छोरी परितोशिकाले अन्जुलाई विवाहको द’बाब दिंदै आएको बताईन्छ । करिब ८ बर्ष अगाडी एक अन्तर्वाताको क्रममा थीरसँग भेट भएको बताउने अन्जुले ४ बर्षदेखि भने एकअर्का बिच राम्रोसँग चिनजान हुन थालेको बताईन् ।बिगत एक बर्षदेखि भने विवाह गर्ने सोच बनाएको अन्जुको भनाई छ । आफ्नो हुनेवाला श्रीमानको बारेमा खुलेर प्रशंसा गर्दै अन्जुले भनेकी छिन्, ‘नाम अनुसारकै उहाँ थीर, शान्त, शालिन, भावुक हुनुहुन्छ । उहाँले मलाई निकै चोखो माया गर्दै आउनु भएको छ र उहाँको त्यो माया प्रति म आभारी छु ।’
गायिका अन्जु पन्तले आफूलाई थिर कोइरालाले चोखो प्रेम दिएको बताएकी छिन्न् । प्रेम दिवसको अवसरमा कुरा गर्दै अन्जुले भनिन्, ‘एउटा किताबमा सयौं पेज हुन्छ । त्यसमा सयौं कहानी र घ’टना हुन्छन् । सोचेको भन्दा नसोचेको घटना आइलाग्छ । म पनि आफै अचम्मि छु, बिहे गर्दिनँ भनेर हिडेकी थिएँ ।’ अन्जुले थिरलाई आफूले नजिकबाट चिनेको ४ बर्ष भएको बताइन् ।अन्जुले आफूलाई थिरले चोखो प्रेम दिएको उल्लेख गरिन् । बिहेको बिषयमा उनले भनिन्, ‘हामी ४ बर्षदेखि नजिक थियौं ।तर, बिहेको कुरा अगाडि बढेको गत बर्षबाट मात्र हो ।
परिवारसँग कुरा गरेर अगाडि बढ्ने सहमती गरेर हामीले एक हुने निर्णय गर्यौं । बिहे कहिले गर्ने भन्ने कुरा त पछि थाहा भैहाल्छ ।’अन्जुले थिरमा इष्र्या, डाहा र छटपटी केही पनि नभएको भन्दै शान्त स्वभावको बानी आफूलाई मन परेको सुनाइन् । आफ्नो प्रेम दिवस विशेष भैरहेको बताउँदै अन्जुले भनिन्, ‘सबैको जीवनमा प्रेमको महत्व हुन्छ । तर, पछिल्लो समय भ्यालेन्टाइन डेलाई फेसनको रुपमा मानिसहरुले लिइरहेका छन् ।प्रेम दिवस फेसन मात्र होइन । किशोर अवस्थामा हुने प्रेम र अहिलेको प्रेम फरक हुने रहेछ ।’
उनले प्रेममा माया, इ’ज्जत, आदरणिय कुरा हुने भन्दै यो कुरालाई वुझेका जोडीको प्रेम सफल हुने सुनाइन् । अन्जुले भनिन्,‘प्रेम, सद्भाव, इ’ज्जत र फि’क्री अझै बढी हुनुपर्छ । दुबैमा एकले अर्कोलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ ।’ अन्जुले थिरका लागि प्रेम दिवसको अवसरमा चलचित्र ‘ऐश्वर्य’मा समावेश ‘तिमी रो’एको पल तिमीलाई’ गाएर समेत सुनाइन् ।गायिका अन्जु पन्तकी छोरी परितोशिका पन्त मोडलिङ हुँदै चलचित्र यात्रामा लाग्ने तयारीमा छिन् । अन्जु आफै पनि अब छोरीलाई मोडलिङमा ल्याउने बताउँछिन् ।
परितोशिका आफ्नी आमाको जस्तो स्वर आफ्नो नभएको र आफू त्यो तहमा नपुग्ने भन्दै गायन पेशमा नलाग्ने बताउँछिन् । हालै मात्र उनी अभिनित म्यूजिक भिडियो ‘धेरै माया नदेउ’ सार्वजनिक भएको छ । यो गीतबाट मोडलिङ यात्रा थालेकी परितोशिका अन्जु पन्तकी छोरी भनेर मानिसहरुले गर्ने मुल्यांकनका कारण खुशी पनि छिन् र दिक्क पनि ।साना–साना ग’ल्ती गर्दा पनि अन्जु पन्तकी छोरी भएर यस्तो गर्ने भन्दा उनको मन दुख्छ । ‘धेरै माया नदेऊ मलाई, टाढा हुँदा गाह्रो हुन्छ ।’ गायिका अञ्जु पन्तले स्वर तथा संगीत भरेको गीत हो यो ।
तर, गीतको भावले उनी र उनकी छोरी परितोषिकाबीचको सम्बन्धको कथा भन्छ । देशकै चर्चित समाचार पार्टल अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा अञ्जु र परितोषिकाले एक अर्काबीचको माया र जिन्दगीका कयौं भोगाइका कथा फुकाए ।अञ्जुलाई छोरी परितोषिका ठूली हुँदै जाँदा एक दिन आफूलाई छाडेर पराई घर जान्छिन् भन्ने सोच आइसकेको छ । तर, के छोरीलाई आमालाई छा’डेर पराई घर जानुपर्छ भन्ने सोच आएको छ त ? परितोषिकाले भनिन्,‘यो त मलाई लागि नै हाल्छ । सधैं त म ममीसँग हुन सक्दिनँ ।
यसैले त मैले ममीलाई जीवनसाथी खोज्न बारम्बार आग्रह गरेको छु ।’अञ्जुलाई छोरीले नै बिहेका लागि स्वीकृति र द’बाब दिएकी छिन् । तर, के अञ्जु बिहे गर्ने सोचमा पुगेकी छिन् त ? प्रश्नले अञ्जुलाई केहीबेर सोच्नमग्न बनायो । भनिन्, ‘नानीले जहिले पनि मलाई किन निराश हुनुभएको भन्छिन् । मेरो डिभोर्स भएको १० बर्ष भयो । १० बर्षदेखि मलाई छोरीको साथ त छ । तर, उनी पनि पराई घर गएपछि मलाई दुख्दा तातो पानी तताएर दिने मान्छे चाहिन्छ । छोरीले बिहे गर्नैपर्छ भनेर प्रेसर दिइरहेकी छिन् । तर, मेरो सोच बिहे नै नगर्ने हो ।
यो मेरो इच्छा नै नभएको कुरा हो । तर, मलाई धेरैले बिहेका लागि सुझाव दिइरहनुभएको छ ।’अहिलेसम्म अञ्जुको जिन्दगी रमाइलोसँग बितिरहेको छ । तर, जीवनसाथी नहुँदा उनलाई पी’डा भएको छ कि भनेर उनकै साथी, आफन्त र छोरीले पनि सोच्ने गर्छन् । अञ्जुको दिमागमा अहिलेसम्म बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोच त आएको छैन । तर, भोलिको दिनमा भइहाल्यो भने पनि उनी सहर्ष स्वीकार गर्ने पक्षमा छिन् । आफूलाई बुझ्ने, नबदलिने प्रेम गर्ने मानिस आएको खण्डमा अञ्जु बिहे स्वीकार गर्ने सोचमा छिन् ।